कोरोना अनुभव : यस्तो पो सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी हुनु त यस्तो पो ……..! | Nepali Health
२०७७ मंसिर १४ गते १३:४९ मा प्रकाशित
विष्णु नेपाल :
काठमाडौँ, १४ मंसिर । चिटचिट पसिनाले गञ्जी चिसो भयो । रिँगटा चल्न थाल्यो । मैले यतिविघ्न टाउको दुखेको जीवनमा कहिल्यै अनुभव गरेको थिइन । ज्वरोको तापक्रम १०० डिग्रीभन्दा माथि नै थियो ।
उठ्न कोशिस गरेँ । खुट्टा टेकिएनन् । छिप्पिँदो रातले बिहानीको प्रतीक्षा गर्दै थियो । कसलाई के भनौँ ? लाग्यो जीवन यति नै रहेछ कि एक श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो छँदै थियो । कोठा उज्यालो थियो । आशाका किरण धपक्क निभे । आँखा घुमे, जता हेर्‍यो सर्वत्र अन्धकार । साहस हराउँदै थियो ।
“शरीर कमजोर पार्न सक्छ । अक्सिजन लेबल झरेको हुन सक्छ । झ्याल बन्द छन् भने खुला गरिदिनुस् । घोप्टो परेर सुत्नु होला । झोलिलो खानेकुरा जति सकिन्छ खानुहोला । आफूलाई सम्हाल्ने प्रयास नछाड्नुहोला । नआत्तिनुहोला । श्वासप्रश्वासमा अप्ठ्यारो हुँदै गयो भने म छु, तुरुन्त केही व्यवस्था गरौँला । सिटामोल खाइहाल्नुहोस्”, डा. प्रवीन नेपालले फोनमा सुझाउँदै जानुभयो । यसैलाई पालना गरेँ । रातले बिहानीको सङ्केत गर्दै थियो । पीडा कम हुँदै गयो । घोप्टो परेर सुत्दा अक्सिनको मात्रा बढ्ने रहेछ । सूर्योदयसँगै नयाँ जीवनको शुरुआत भएकोे महसुस गरेँ । कोरोना मसँग अवश्य पराजित हुन्छ र गर्छु भन्ने दृढता उर्लेर आयो । ‘चिकित्सक भगवान् हुन्’ भन्ने कुरा यसै भनिएको रहेनछ । स्वास्थ्यकर्मीको मीठो बोली, सहज उपलब्धता, सरल व्यवहारले सङ्क्रमितको मनोबल उच्च हुँदो रहेछ । यही कुरा सङ्क्रमितले स्वास्थ्यकर्मीबाट अपेक्षा गरिराखेका हुन्छन् । यसले कोरोनालाई परास्त गर्न सामथ्र्य प्राप्त हुँदोरहेछ । मेरो अनुभव यही रह्यो ।
हँसिलो अनुहार र मिठास बोलीका धनी डा. नेपालसहित एपिएफ अस्पताल बलम्बुमा कार्यरत युवा चिकित्सक, नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीका टोलीले कोरोना सङ्क्रमितका उपचारमा समर्पण गर्नुभएको सेवा र प्रतिबद्धता अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई उदाहरणीय बन्नसक्छ । उहाँहरुको सेवाभाव, बोली र व्यवहारले पछिल्लो समय अस्पतालको नाम र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाएको छ ।
बिरामीले निजी अस्पतालमा जस्तो दैनिक हजारौँ खर्च गर्दा नपाइने चिकित्सकीय सेवा, खानपान तथा अन्य बन्दोबस्ती निःशुल्क पाएँ । अस्पतालबाट कोरोनालाई जितेर घर फर्किनेहरु भन्छन्, “अस्पताल हुनु त यस्तो पो । पुनर्जन्म लियौँ । धन्य ! एपिएफका स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापक । चाहे के गर्न नसकिँदो रहेछ र ? उपचार सेवा, स्वास्थ्यकर्मीका बोली व्यवहार, खानपान र भौतिक बन्दोबस्ती व्यवस्थामा अभाव छैन ।” हालै १० दिन अस्पतालमा भर्ना भई ज्वरो निको हुनुभएका धादिङ सिद्धलेक गाउँपालिका– ७ का राममणि खतिवडाले भन्नुभयो, “सरकारी अस्पताल हुन त एपिएफ जस्तो । स्वास्थ्यकर्मीका सेवा , मीठो बोलिवचन, सरसफाइ र खाना राम्रो लाग्यो । बिरामीलाई उपचार त छँदैछ, स्वास्थ्यकर्मी र व्यवस्थापकले बिरामीको पीडालाई राम्ररी बुझ्ने गर्नुहुँदोरहेछ ।”
उपचार सेवा त उत्कृष्ट छँदैछ । स्वास्थ्यकर्मीले गर्ने व्यवहार, खानपान र सरसफाइ असाध्यै राम्रो रहेको कोरोनालाई जितेर घर फर्किएकाले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अस्पतालमा कोभिड–१९ को स्थानीय स्रोत व्यक्तिसमेत रहनुभएका वरिष्ठ शल्यचिकित्सक नेपालले विजयादशमी मनाउन पाउनुभएन । उहाँ कोरोना सङ्क्रमित हुुनुभयो । “आफू सङ्क्रमित हुँदा मलाई सङ्क्रमितका पीडासँग अझ नजिक पुर्‍यायो । घरमै आइसोलेशनमा बस्दा सामाजिक सञ्जाल र टेलिफोनमार्फत बिरामीलाई दिनरात नभनी चिकित्सकीय ज्ञान र औषधि भनिदिएँ”, उहाँले भन्नुभयो, “तपाईलाई सल्लाह दिएको रात म पनि आइसोलेशनमै थिए । पोजेटिभ देखिएको दुई-तीन दिन मात्र बितेको थियो । केही अप्ठ्यारो मलाई थियो । सहकर्मी चिकित्सकले अस्पतालमा बस्न आग्रह गरेका थिए । आफूभन्दा जटिल बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । आफ्नो श्यया बिरामीलाई छाडेर आइसोलेशन बस्न घर रोजँे ।”
उहाँले कोरोना उपचार र अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनमा तल्लीन हुँदाहुँदै सङ्क्रमणसित जुध्नुपर्‍योे । ठट्टा गरी हाँस्दै भन्नुभयो, “कोभिडमा काम गर्नेले कोभिड हुनुपर्दोरहेछ । यसबाट समग्र व्यवस्थापनमा छिटो सुधार गर्न थप बल मिल्ने रहेछ ।”
अस्पतालमा कार्यरत डा आशीष थापाले भन्नुभयो, “शुरुआती दिनमा कोरोना उपचारसित सम्बन्धि मार्गनिर्देशन तथा उपकरणको कसरी व्यवस्थापन गर्न चिन्ता भयो । सरकार र अस्पताल व्यवस्थापनका उच्च नेतृत्वबाट द्रुत काम भयो । हामी चिकित्सकलाई पनि सामान्य डर र त्रास त छँदै थियो । कोरोना सङ्क्रमित भइन्छ कि भन्ने भय हुन्थ्यो । केही भयका बीचमा बिरामी परीक्षण गर्न लाग्यौँ । विस्तारै बानी पर्दै गयो । अहिले कोरोना बिरामीको उपचारमा समस्या छैन ।” अस्पतालबाट कोरोना जितेर घर फर्किन लाग्दा बिरामीले व्यक्त गरेका खुशी नै सम्पत्ति हो, यहीमा आनन्द आउँदो रहेछ र बिरामीलाई निको बनाउनु नै चिकित्सकको सफलता हो उहाँ भन्नुहुन्छ ।